गाँजा खाएर किन हाँस्छ मान्छे ? किन रुन्छ मान्छे ? | | Nepali Health
गाँजा खाएर किन हाँस्छ मान्छे ? किन रुन्छ मान्छे ?
२०७२ फागुन २४ गते ९:२१ मा प्रकाशित
आज महाशिबरात्री पर्व । देशभरका शिवालयमा धुमधामका साथ महाशिवरात्री पर्व मनाइदै छ । शिवालयमा पुजाआजासंगै आज कतिपयले शिबजीको प्रसाद भन्दै गाँजा खाने चलन पनि छ ।
नेपालमा गाँजा सेवन अवैध मानिएको छ । तर शिबरात्रीका दिन शिवालय आसपासमा शिवको प्रसादको रुपमा भन्दै कतिपयले निर्वाध रुपमा गाँजा सेवन गरेको देखिन्छ । गाँजा खाएर कोही लट्ठ परेको, कोही हासेको हास्यै गरेको र कोही रोएको रोयै गरेको देखिन्छ ।
गाँजामा त्यस्तो के छ ? जसको सेवनले मानिसको स्वभावलाई क्षणभरमै परिवर्तन गरिदिन्छ ? आज हामी त्यहि शिबबुटी अर्थात गाँजाको विषयमा कुरा गर्नेछौँ :
हाम्रो मस्तिस्कमा प्राकृतिक रुपमा पाइने क्यानाविनोइड भन्ने रसायन हुन्छ । जसले विचार सोचाई तेजिलो तिखो बनाउने काम गर्छ । गाँजामा पनि ६० भन्दा बढी अलग प्रकारका क्यानाबिनोइड पाइन्छ । त्यसैले गाँजा सेवन गर्दा ती रसायन हाम्रो मस्तिष्कमा जान्छ । जसमध्ये टेट्रा हाइट्रो क्यानाबिनोल (टि.एच.सी.) प्रमुख हो ।
सामान्य त बाहिरी बातारबणले गर्दा हाम्रो ध्यान कुनै विषयमा केन्द्रीत हुन पाउदैन । तर गाँजामा पाइने यो क्यानाबिनाइड रसायनले बाहिरी बाताबरणलाई प्रभावलाई खुम्च्याएर आफ्नो प्रभावलाई फैलाउछ । जसका कारण मानिस एकाग्र बन्न पुग्छ ।
त्यहि अवस्थालाई हामी नसा लागेको भन्छौँ । यति मात्र नभई क्यानाबिनोइडले निन्द्रा, भोक, प्यास, भावना आदिमा पनि प्रभाव पार्छ जसको कारण कोही सुतीहरने, कोही भोक लाग्यो भनिरहने कोही हाँसिरहने, कोही रोइरहने आदि कसराहरु सुन्नमा आउँछन् ।
क्यानाविनोइडले मस्तिस्कमा रहेको आनन्दको केन्द्र डोपामाइन प्रक्रियामा प्रभाव पारी कतिपयमा आनन्ददायी भावना पैदा गरिदिन्छ ।
गाँजा सेवन गरेको केही मिनेटदेखी लाग्न थाल्छ र आधा घन्टाभित्र चरम बिन्दुमा पुग्छ । यसको प्रभाव दुई तीन घन्टा सम्म हुन्छ तर सेवनको मात्रा बढि छ भने यो समय बढ्छ । हरेक व्यक्तिको आ आफ्नो गुणको आधारमा हरेक व्यक्तिमा गाँजाको असर फरक फरक देखिन्छ ।
एमबीबीएस र बीडीएसको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, ६९ प्रतिशत पास
सरकारले भन्यो, ‘रेम्डेसिभिर औषधि कोभिड-१९ सूचिकृत अस्पतालका फार्मेसीमा पाईन्छ’
कोरोना उपचारका लागि अब सबै अस्पताल र मेडिकल कलेजले ५० प्रतिशत शैय्या छुट्याउन पर्ने
काठमाडौँ उपत्यकामा थप १६९८ जनामा कोरोना संक्रमण
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थपिए २९४२ जना कोरोना संक्रमित, २३२६ डिस्चार्ज
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक छनौट प्रक्रिया : लोकसेवाद्धारा तीन जनाको नाम सिफारिस
अर्का नक्कली प्रमाणपत्रधारी चिकित्सक पक्राउ
११ हजार हाइड्रोसिल पिडीतको नि:शुल्क अप्रेसन गर्दै सरकार
कोरोना भाइरस ‘कुनै कुनै सतहमा २८ दिनसम्म बाँच्छ’
सरकार र डा गोविन्द केसीबीच ८ बुँदे सहमति, अनसन आज तोडिने
पछिल्लो २४ घण्टमा देशभर थपिए ५००८ जना कोरोना संक्रमित, १२२९ जना डिस्चार्ज